トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Qwalasela phawu-mkhwa pa parlour [uhlengahlengiso isikhonkwane kunye nezikhonkwane ISityhi Mhl.]
Xa kudla baya kudlala elibe pa, ndicinga ukuba siza kubona injongo yokuqala yaba ngulowo imodeli ngamnye. Ngoko ke, lo ngowona uhlengahlengiso isikhonkwane, ukuba ndifuna ukuqinisekisa. uhlengahlengiso nail, nokuba kukho ukulungele bazicima iivenkile, kuba izinto isigqibo okanye hayi naye. Ngaphandle kulo mzekelo, ezifana CR, kuba loo Hanemono maxa wambi hlengiso isikhonkwane nje ngokubanzi yahlulwe isiphumo, abantu abayi kuba nako Kwathi ukunqanda itshekhi ulungelelwaniso isikhonkwane, oko ngakumbi umdlalo kwiziko Hanemono.
uhlengahlengiso iinzipho, umphathi okanye abakhulu, nayo ukuphumeza umntu othile, ezifana isikhonkwane artist eqhelekileyo. Le abantu, nangona ngokuqhelekileyo ubomi kukho umkhwa. Into yokuba kukho umntu othile nalo lwenziwa kwi pa parlour kukuba umkhwa hlengiso yi venkile nganye ku xaniseka. Ukuba Minukere lo mkhwa hlengiso iinzipho, ipesenti ophumelele uya kunyuka ngaphezu ingenisa ongayaziyo.
Ngoko ke, siza kwazisa i ukubona indlela hlengiso isikhonkwane.
ukubona lolungelelwaniso isikhonkwane, nge pa parlour malunga neeveki ezimbini ukusuka kwiveki enye ubuncinane, kuya kufuneka ukuba siyigcine. Ethetha kutheni, ngokuba lolungelelwaniso isikhonkwane senziwe umahluko nje iimillimitha ezimbalwa, hayi Ika ngokuqinileyo zibonwa kwindawo pin, u miss. Beginners, kwaye ngokwaneleyo ukwazi ukuba lokuqala ngokucacileyo look evulekileyo, ithi nzima ukufumanisa whether're ukuvula kakhulu. Ukuba uvule ngeenxa zonke izikhonkwane ka
siqithi, kwelase ukuze yi kwivenkile nganye, akunamsebenzi ke kuthi apha,, xa ujonge lo isikhonkwane ukusuka phezulu, zama ukhangela olu hlobo isikhonkwane nceda. E
, kodwa olo hlengahlengiso isikhonkwane isiqalo lula-to-ukuqonda kakuhle.
mindzulamiso isikhonkwane zokuqinisa imvakalelo e nesendlu pa, omnye isikhonkwane, kancinci ecaleni isiqalo chucker, na ityala apho isikhonkwane ezilizelayo ngaphandle. Kwimeko yale uhlengahlengiso iinzipho, le ndawo ibizwa ngokuba izihlandlo ezintandathu ukusuka isantya ojikeleza ngaso lomzuzu 1 5 amaxesha. Ukulungise, nceda ucinga ukuba uhlengahlengiso uzipho eqhelekileyo ukuguquka eziphakamileyo, nesendlu ratio pa.
Ukuba Songeze ngokuqinisa, qala ingxoxo Kuwo omabini amacala imoto, uya kubona zilala phezu zombini isikhonkwane. Kwimeko yale uhlengahlengiso iinzipho, le ndawo ibizwa ngokuba izihlandlo ezihlanu ukusuka isantya ojikeleza ngaso lomzuzu 1 malunga 4.6 amaxesha. Ngemini ukuqokelelwa, xa ufuna i ngokupheleleyo ingeniso gross, qaphela ngokuba uhlengahlengiso isikhonkwane evela kwezinye iindawo. Ukuba Ayembetha lezikhonkwane ngokuqinisa, kuya kuba ngokukhawuleza wayigqiba Nante amawaka yen. E
, khangela isikhonkwane ukusuka phezulu ukuya koko, isikhonkwane mhlawumbi omnye lezikhonkwane, zivulelekile ngaphandle ngaphezu ekuqaleni chucker nkqu kancinane isikhonkwane elungileyo. Ukuba ukhangele ngentla, umahluko ocacileyo phakathi ungabona. Ukuba kudla ibonwa isikhonkwane uhlengahlengiso ukuba iziganeko ezinjalo. Kulo mzekelo, isantya ojikeleza ngaso lomzuzu-1 kuya kuba ukususela kumaxesha 6 7. Ngapha nangapha lezikhonkwane
, okanye ezivulekileyo kubonakala, apho kuya kubakho abantu umkhwa ukulungiswa isikhonkwane. Xa utyelelo pa ivenkile of bonke, bobabini nokuba evula isikhonkwane, nceda uzame ukukhangela.
Ukongeza, kancinane ngaphambili phantsi iphiko, kukho iindawo apho kukho umsantsa phakathi isikhonkwane kunye nail.
omabini amacala kuzipho umsantsa, bambethelela ngokutsha embi, ngaphambi kokuba aye ekuqaleni, siye sibe apha naphaya, ezifana ibhola iwela khona. uhlengahlengiso nail, kuba oko ukwakha ebhodini yonke, kungekhona nje ukuqala, kwicala isikhonkwane Kwakhona sikukhuthaza ukuba ukuzama ukuqinisekisa.
Nokuba zange ujonge lezikhonkwane ukuza kuthi ga ngoku, bambethelela ngokutsha ezisisiseko wabheka ukusuka phezulu, ndicinga ukuba ingqalelo ihlawulwe kunye nenye slingshot enjoy angenza. It is a ndawo amaxesha izihlandlo ezi-5 ukusuka 6. Ngemini ukuqokelelwa, xa ufuna i ngokupheleleyo ingeniso gross, qaphela ngokuba uhlengahlengiso isikhonkwane evela kwezinye iindawo. Ukuba Ayembetha lezikhonkwane ngokuqinisa, kuya kuba ngokukhawuleza wayigqiba Nante amawaka yen. E
Nokuba zange ujonge lezikhonkwane ukuza kuthi ga ngoku, bambethelela ngokutsha ezisisiseko wabheka ukusuka phezulu, ndicinga ukuba ingqalelo ihlawulwe kunye nenye slingshot enjoy angenza. Kucetyiswa ukuba uzama.
Nokuba zange ujonge lezikhonkwane ukuza kuthi ga ngoku, bambethelela ngokutsha ezisisiseko wabheka ukusuka phezulu, ndicinga ukuba ingqalelo ihlawulwe kunye nenye slingshot enjoy angenza.